SIBO Ndị Ọrụ Nhazi Mmezi
Na Disemba 27th, 2020, mgbe e mechara nzukọ nyocha kwa afọ, SIBO haziri ọrụ mmepe ogo maka ndị ọrụ mara mma, iji nyere ha aka ịmatakwu onwe ha na ndị otu, ma kwalite mmepe nke otu. Mgbe ọzụzụ ụbọchị zuru ezu, ọ bụ ezie na ahụ ike gwụrụ, mana n'uche nwere ezigbo owuwe ihe ubi, mana nke ka mkpa nye onye ọrụ ọ bụla, ka otu ahụ nwee nghọta ọhụrụ, nke ahụ bụ mmadụ ịzụlite, ntụkwasị obi onwe ya dị mkpa, yana mmepe nke ụlọ ọrụ, a omiiko otu dịkwa mkpa.
Nke mbụ bụ ụlọ egwuregwu. Otu egwuregwu bụ otu ndị mmadụ hibere iji nweta otu ebumnuche. Ọ bụ mbọ onye ọ bụla nọ n’otu ahụ na-eme ka otu egwuregwu na-agba ọsọ nke ọma. Nke abụọ abụrụ cohesion. Onweghi onye matara ihe ọzọ aga eme rue mgbe onyeisi ụgbọ ahụ kwupụtara ọrụ ọzọ. N'oge a, anyi kwesiri inwe ezigbo nnweko, odikwa mkpa ikwusi okwu ike na ichota echiche. N’agbanyeghi na enwere esemokwu na esemokwu di iche iche, anyi nwere nani otu ebumnuche, ya bu, imecha oru a n’adighi ike. Nke atọ bụ ikike ịnwale ma gbue. Mgbe otu usoro dara, a ga-etinye usoro ọzọ n'ọrụ ozugbo. Mgbe ejirila usoro niile, anyị na-achọta usoro kachasị ekwe omume, nke bụ ọdịdị nke ngwakọta nke ịnwale na igbu.
Mgbe anyị sonyechara na mmepe a, onye ọ bụla nwere ike ịnụ ihe kachasị bụ nchịkọta, kwuo nke kachasị bụrụ nchịkọta, chee echiche banyere ya, nchịkọta ahụ abụghị ihe na-agaghị ekwe omume, site na obere ahụ nnukwu, anyị kwesịrị ịme obere nchịkọta na ndụ gara aga , na ọrụ nke nnwale, ọdịda na ihe ịga nke ọma nke nchịkọta. N'ime ọrụ anyị na ndụ anyị, enwere ọtụtụ ebe ekwesịrị ịchịkọta. Naanị site na ichikota ị nwere ike ịme ka mma na naanị site na imeziwanye ka anyị nwere ike inwe ọganihu. Nchịkọta na-enye gị ohere ikwu okwu banyere oge gara aga, chee ihu ruo ugbu a ma hụ nke ọma ọdịnihu. Naanị otu a ka ọrụ anyị ga-esi na-aga n'ihu nwayọgobe ebumnuche ndị edobere.
Post oge: Feb-20-2021